RESIDENT EVIL: Infinite Darkness (2021) – Gold Channel Movies
Resident Evil ဆိုတာ Zombie ဂိမ်းကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ Gamer လေးတွေနဲ့တော့ မစိမ်းတဲ့နာမည်တစ်ခုပါ။ ၁၉၉၆ ခုနှစ်ကတည်းက စတင်ထွက်ရှိလာတဲ့ ဒီဂိမ်းလေးဟာ လူကြိုက်များလှတဲ့အပြင် သူနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ကာတွန်းတွေ Live action တွေလည်း အများအပြားထွက်ရှိထားပါသေးတယ်။
အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ Netflix မှာ အသစ်စက်စက်ပြသမယ့် Resident Evil: Infinite Darknessဆိုတဲ့ Animeဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Series မှာတော့ Leon S. Kennedy နဲ့ Claire Redfieldတို့က လွန်ခဲ့တဲ့ ၆ နှစ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ Penamstan ပြည်တွင်းစစ်မှာ လူမသိသူမသိ Zombie outbreak ဖြစ်ခဲ့ခြင်းကို စုံစမ်းကြမှာပါ။ ရုတ်တရက်အရေးကြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ အိမ်ဖြူတော်ကို စေလွှတ်ခံရတဲ့ Leon တစ်ယောက် အိမ်ဖြူတော်မှာ Zombie တွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရတဲ့အပြင် အိမ်ဖြူတော်ကဖိုင်တစ်ချို့လည်း အခိုးခံရတဲ့အတွက် သမ္မတကြီးက စိုးရိမ်ပူပန်နေပေမယ့် Defense secretary Wilsonကတော့ တရုတ်နဲ့ပတ်သတ်ကြောင်းကိုပဲ ထပ်တလဲလဲပြောဆိုပြီး စစ်ဖြစ်ဖို့ပဲလမ်းကြောင်းပေးနေခဲ့ပါတယ်။ ‌Wlison ရဲ့တိုက်တွန်းချက်နဲ့ပဲ Leon တို့တွေလည်း ရေငုပ်သင်္ဘောနဲ့ တရုတ်ကိုခိုးသွားရဖို့ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ ရေငုပ်သင်္ဘောပါ ရုတ်တရက် တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အခါ…
Jason နဲ့ Shen May ကရော ဘာလို့အရမ်းလျှို့ဝှက်နေတာလဲ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၆ နှစ်က Penamstan မှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့ပြီး Zombie outbreak အကြောင်းသဲလွန်စကို ဘယ်သူကဘယ်လိုရသွားတာလဲ။ ပြဿနာအားလုံးရဲ့နောက်ကွယ်မှာ တကယ်ရှိနေတာက တကယ်ပဲတရုတ်နိုင်ငံလား ဒါမှမဟုတ် တခြားတစ်ယောက်လားဆိုတာကိုတော့ ဒီစီးရီးလေးကိုကြည့်ရှုရင်းပဲ Leonတို့နဲ့အတူ စုံစမ်းဖော်ထုတ်လိုက်ရအောင်ပါ။
Review by MaryChrist
Translated by MaryChrist & Cherry Mon
Aung Pyae KyawJuly 10, 2021Reply
Ep2 user link ကဒေါင်းမရတော့လို့ပါဗျ
Kaung HtetJuly 9, 2021Reply
အပေါ်ဆုံးက user…. နဲဆွဲတာ အစဉ်ပြေတယ် I’m not rebort ကိုတော့ စလစ် လုပ်ပေးရမယ် လွယ်မာပါ
akhJuly 9, 2021Reply
အခြားလင့်လေးတွေထည့်ပေးပါ medifire ကဒေါင်းမရတာများပါတယ်။ mega ကလည်း ဒေါင်းမယ်ကျန်သေး ဖိုင်မရှိတော့ပါ
MichaelJuly 9, 2021Reply
ep3& ep4tin payy par ownn…pls
KnaveJuly 10, 2021Reply
ကျေးဇူးတင်ပါတာယ်ဗျ။ ကျန်တဲ့2ပိုင်းလည်းဆက်တင်ပေးပါဦးနော်။ Katla လည်းဆက်တင်ပေးပါဦးနော်။
Ep2က​ user link ဒေါင်းမရတော့လို့ဗျ လုပ်ပေးပါအုံး
Sithu soeJuly 9, 2021Reply
Thaks so much.(*_*)
The Gifted Graduation 2